eNasha.com - रिमिक्सका प्रेरक
अहिले बजारमा तपाइँले जति पनि रिमिक्स गीत सुन्नु हुन्छ, तीमध्ये अधिकांश राम थापाले उहिले गाउँघरबाट टिपेर ल्याएका लोकगीतका धुन हुन् । ती धुनमा अहिलेका डीजेहरुले नयाँ स्वाद र शैली थपेपछि उनको पुरानो मिहिनेतले थप रङ पाएको छ । तर पनि कतिले नेपाली गीत सङ्गीतमा विस्तारै बिर्सदै गइरहेको नाम मान्छन् । तर ऋतुहरुमा तिमी, जुनीजुनीलाई, लेकाली हे चोयाको डोकोजस्ता उनका सिर्जनाहरुलाई एकपटक सम्झने हो भने राम थापा पलपल श्रोताहरुमाझ नजिकिइरहेका नाम हो । आफू सधैँ कम चर्चामा रहे पनि उनका सिर्जनाहरु सधै चर्चाको शिखरमा छन् । उमेरको हिसावले त्यति धेरै वसन्त पार नगरेका राम थापा सिर्जनात्मक हिसाबले निकै परिपक्व छन् ।
वि.सं.२०१५ साल भाद्र २ गतेका दिन काठमाडौँ जिल्लाको कमलपोखरीमा बुबा हस्तबहादुर थापा र आमा हिराकुमारी थापाको सुपुत्रका रुपमा राम थापाले यस धर्तिमा आउने मौका पाएका थिए । त्यसपछि बालक राम थापा डेढ वर्षको उमेर पुग्दानपुग्दै घरायशी कारणले गर्दा आमासँगै मामाघर चौतारा, सिन्धुपाल्चोक पुगे ।
कक्षा ५ मा पढ्दाताका भने मामाघरमै लागेको सङ्गीतको नशाले विकसित रुप लिइसकेको थियो । उनले टोलकै केही ठूला दाइहरुसँग मिलेर गीतार बजाउन सिके ।
अब उनको रुचि पढाईमा कम र सङ्गीतमा बढी हुन थाल्यो । यसको परिणाम परीक्षामा सधैँ पहिलो भएर आमाबुबा र गुरुहरुको स्याबासी पाउने राम थापा पास मात्रै हुन थाल्छन् । यसरी सम्पूर्ण ध्यान सङ्गीतमा लगाउदै भएपनि उनले १४ वर्षको कलिलो उमेरमै २०२९ सालमा युवक मा.वि., पकनाजोलबाट एसएलसी पास गर्छन् ।
बाल्याकालमा थापा पढाइलेखाइ र सङ्गीतको अतिरिक्त फूटबल खेलमा पनि निकै रुचि देखाउँथे । समूहमा सबैभन्दा सानो भएका कारण साथीहरु उनलाई हेपेर गोलपोष्टको सुरक्षामा खटाउँथे । १४/१५ वर्षको उमेरसम्म पनि गोलपोष्टमै रमाइरहेका राम थापा होचो कदका भएका कारण विपक्षीको अग्लो प्रहारलाई रोक्न पटक-पटक असफल हुन्थे । यसरी आफ्नै कारणले टिमले धेरैपटक हार व्यहोरेपछि उनले फूटबल खेल्नै छाडिदिए । फूटबल त छाडे छाडे एसएलसीपछि त उनले पढाई पनि छोडे र सङ्गीतमा केही गर्ने उद्देश्यका साथ एकोहोरो साधनामा लागे ।
एसएलसी पढाइ सक्दासम्म गीतारमा कर्ड खोजीखोजी बजाउन सिपालु भइसकेका राम थापाको यो खुबीलाई निगरानी गरिरहेका भैरवबहादुर थापाले आफ्नो संस्था भैरव नृत्य दलमा उनलाई समावेश गराए । टोलटोलमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने यसै संस्थामा थापाले मादल, हार्मोनियम बजाउन र नाच्न सिके । साथीहरु मीरा राणा, हरिवंशहरुसँगै उनको क्षमता खारिदै गयो ।
बागबजारको पद्मकन्या कलेज छेउमा राम थापाले एउटा कोठा भाडामा लिएर २/४ जना केटा भेला पारेर गीतार सिकाउन थालेका थिए । नाच्न, गाउन र बजाउनमा उस्ताद राम थापालाई उमेरमा मन पराउने ठिटीहरुको कुनै कमी थिएन । तर राम थापाको मनमा भने पद्मकन्या कलेज पढ्ने रजनी श्रेष्ठको तश्विरले ठाउँ लिइसकेको थियो ।
युवाअवस्थामा साथीहरुसँग बसेर खानपिउनमा निकै अग्रसर हुने राम थापा फेसनका कपडा लाउन र चिटिक्क परेर हिँड्न त्यति रुचाउँदैन थिए ।
२०३१ सालसम्म राम थापा भैरव नृत्य दलमा नाच्ने, गाउने, गीतार, हार्मोनियम बजाउने गर्थे । तर उनी भैरव नृत्य दलमा मात्रै सीमित हुन चाहेनन् र आफ्नो यात्रालाई रेडियो नेपालतर्फ बढाउन थाले । २०३१ सालमै उनले रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षा पास गरे । स्वर परीक्षा पास गरेपछि आफ्नै सङ्गीतमा- हाई हाई वनकाली माई बोलको गीत रेकर्ड गराए । गायिका तारा थापासँग रेडियो नेपालमा गाएको पहिलो गीत वनकाली माई चर्चित गीतको लहरमा परेपछि उनका लागि रेडियो नेपालको यात्रा सहज बन्दै गयो ।
त्यसपछि दोस्रो पटक गाएको गीत लेकाली हे चोयाको डोकोले त झन उनको अघिल्लो गीतलाई पनि समेत ओझेलमा पार्नेगरि चर्चा बटुल्न सफल भयो । त्यसपछि जति पनि गीतहरु गाए, सबै सफल नै भए । एकपछिका अर्को सफलताले गर्दा राम थापाका लागि रेडियो नेपालको ढोका सदैव खुला भयो । २०३३ सालमा एउटा गीतमा गीतार बजाएको रु. ५ पाउने शर्तमा रेडियोमा गीतारवादकको जागिर पाए । सङ्गीत भनेपछि हुरुक्क हुने राम थापालाई त्यसपछि के चाहियो र ? आँखा चिम्लेर दिनरात साङ्गीतिक सीप तिखार्न पट्टी लागे । उनले गीतारमा सरगम सिके, नोटेशन सिके । सङ्गीत सिकाईकै क्रममा २०५० सालमा भारतको प्राचीन कलाकेन्द्र, चण्डिगढबाट शास्त्रीय सङ्गीतको स्वरतर्फ प्रथम श्रेणीमा विशारद गरे । संगीत सिक्ने क्रममा उनले कुमार बस्नेतलाई लोकसङ्गीतको गुरु मानेका छन् ।
राम थापाले विस्तारै आधुनिक सङ्गीत सिर्जनामा पनि रुचि देखाउन थाले र, २०३५ सालमा आफ्नो संगीत रहेको गीत कल्पनाको नौलो संसारलाई गायक दिवाकर खड्काको स्वरमा पहिलो पटक रेकर्ड गराए । रेकर्ड गरेको पहिलो गीत नै चर्चित बनेपछि उनलाई आधुनिक गीतहरुमा पनि संगीत भर्ने जाँगर बढ्दै गयो । हालसम्म ३०० जति आधुनिक गीतमा सङ्गीत भरिसकेका राम थापाका अधिकांश गीतहरु श्रोताले मन पराएका छन् । भक्तराज आचार्य, मीरा राणा, तारा थापा, रवीन शर्मा, स्व.अरुण थापा, ओमविक्रम बिष्ट, प्रेमध्वज प्रधान, प्रकाश श्रेष्ठजस्ता देशका चर्चित गायकगायिकाहरुले उनको सङ्गीतमा आफ्नो स्वर दिइसकेका छन् ।
राम थापाको सङ्गीत रहेको ऋतुहरुमा तिमी हरियाली वसन्त हौ २००२ मा बि.बि.सी.लण्डनले गरेको सर्वेक्षणमा संसारकै १० उत्कृष्ट गीतहरुमध्ये सातौँ स्थानमा परेर सम्पूर्ण नेपाली सङ्गीतकर्मीका साथै नेपालीहरुको पनि इज्जत बढाएको छ ।
वि.सं.२०३१ देखि २०६३ सालसम्मको ३२ वर्षको यात्रा अवधिमा थापाले १६ ओटा लोकगीतको एल्बम, ५ ओटा आधुनिक गीतको एल्बम र १० ओटा जति हास्यव्यङ्ग एल्बमहरु प्रकाशित गरिसकेका छन् । त्यस्तै जुनीजुनीलाई र घायल प्रेम नामको दुइ भिडियो चलचित्र र बादल, घामछायाँ, आँखा लोभी मन पापी गरी तीन ठूला पर्दाका चलचित्रमा पनि सङ्गीत दिएका ऊनले यी चलचित्रपछि भने चलचित्र सङ्गीतमा त्यति जाँगर चलाएका छैनन् ।
साथीहरुसँग हाँसखेल गर्न, जिस्किन मन पराउने राम थापा गम्भीर प्रकृतिका साथीहरुलाई पनि आफू अनुकूल व्यवहार परिवर्तन गराउन माहिर छन् ।
राम थापाले आफ्नो आवाजलाई लोकगीतका साथै रेडियो उद्घोषणमा पनि राम्रैसँग उपयोग गरेका छन् । उनले २०३८ सालदेखि २०५४ सालसम्म र २०४७ सालदेखि २ वर्षजति आञ्चलिक सुस्केरा नामक लोकगीति कार्यक्रममा पनि स्वरको जादू देखाइसकेका छन् । हाल राम थापा रेडियो नेपालमा लोकगीततर्फ प्रतिष्ठित श्रेणीका गायक र आधुनिक सङ्गीततर्फ प्रतिष्ठित श्रेणीको सङ्गीतकारको रुपमा कार्यरत छन् ।
नेपाली सङ्गीतमा लामो समयदेखि अनवरत सेवा गरेवापत् उनले विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मानपदकहरु पनि पाएका छन् । उनले हालसम्म २०३६ सालमा आयोजित अधिराज्यव्यापी लोकगीत प्रतियोगितामा दोस्रो पुरस्कार, २०४० सालमा आयोजित आधुनिक गीत प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कार, २०५० सालमा नारायण गोपाल युवा पुरस्कार २०५९ सालमा छिन्नलता सङ्गीत परस्कार पाइसकेको छन् ।
गीत गाउन, सङ्गीत सिर्जना गर्नबाहेक थापाको रुचि गीतार गाइड निकाल्नमा पनि रहेको छ । आफूले युवा अवस्थामा गीतर सिक्न खोज्दा पाएको पीडा नयाँ पुस्ताले नपाउन् भनी गीतार सिक्न चाहनेहरुका लागि उनले गीतारवादनसम्बन्धी १२ ओटा किताबहरु निकालिसकेका छन् ।
गीतसङ्गीतमा लागेपछि पाएको असंख्य श्रोताको माया, रेडियो नेपालको प्रतिष्ठित जागिरको बावजूद पनि उनको जीवनमा एउटा घटना कहालीलाग्दो घटना बनेर सधैँ रहनेछ । त्यो हो उनको एकमात्र छोराको केही वर्षअघि भएको निधन ।
तर पनि उनी थकित देखिँदैनन् । उनले हालैका दिनमा दुइ वटा लोकगीत निकालिसकेका छन् भने आफ्ना पुराना लोकप्रिय गीतहरुलाई रिमिक्स निकाल्नेतिर ध्यान दिइरहेका छन् । सर्जक हुनु त यस्तो पो !
सङ्गीतकार रिलिज समुद्रपार कीर्तिमान क्या बात ! लुकेका कुरा तातोपीरो ट्रयाक बाहिर नेपाली तारा अवार्ड प्रेम र विवाह उपलब्धि भिडन्त विचार पेज थ्री गायिका रुचि गायक कन्सर्ट बजारमा